NeHGH Thailand Dai 30, 2018
1. Ndingawanepiko HGH kana kuti Human Growth Hormone muSingapore
2. Chirongwa Chakanakisisa cheHGH muSingapore
2.1 Vimbisa hukuru hwevanhu hwekukura kwehomoni
2.2 Kusununguka kwekushandisa HGH Genotropin pen
2.3 Yakawanda yakachengetwa
2.4 Famba neHGH mundiro uye pahandare
3. Chii chinonzi HGH (Somatropin)?
3.1 Kushandisa HGH mumutambo
3.2 Kurapa kwamabvi uye nerubatsiro rwekukura kwehomoni
3.4 Ko kukura kwehomoni kunobata sei musimba kukura?
3.5 Kurapa kwekuneta uye kuora kurasikirwa
3.6 Kurapa kwevarume vakwegura vachembera muSingapore
4. Zvimwe zvikamu zvekukura kwehomoni
5. Nhamba yeHGH
6. HGH mutengo muSingapore uye nzira dzokubhadhara
6.1 Mwedzi unobhadhara wekuwedzera hormone muSingapore
HGH Thailand pharmacy ndeimwe yevanhu vakakurumbira kukura mahomm pharmacy vanobatsirana zviri pamutemo nevatengi vanodiwa somatropin munyika yose kusanganisira varwere vedu vanobva kuSingapore. Zvose kukura hormone kugadzirira zvakakwana zvakakwana muThailand neSingapore, zvine zvivako zvepamusoro uye malayisensi.
Varwere vanobva kuSingapore vanogona kubvunzurudza uye kugamuchira mushonga muBangkok zvose pahofisi yedu uye nekutumira tsamba uye nekubva kune vanyori vedu pakero yako uyo anokuratidza zvakanaka kuti ungatora sei HGH injections, iwe unogonawo kuraira kuwanikwa kwekukura kwehomoni kuSingapore kubva kuThailand kusvika pamusuwo weimba yako, zvose zvinokurudzirwa, mazano ekutora uye kuraira kwekuita uye kubhadhara kunogona kuitwa paIndaneti pasina kusiya kumba.
Dhipatimendi redu redu rinotora zvose zvinotarisirwa kugadziriswa kwekukura kwehomoni muSingapore, kubvumirwa kwemitemo uye kusunungurwa kwekutora.
Chii chinonyanya kukosha cheHGH muSingapore?
Maererano nevatengi vedu vanobva kumativi ose enyika, kusanganisira varwere vanobva kuSingapore, munhu akakurumbira kukura hormone ndiyo yakagadzirwa nekambani Pfizer - Genotropin GoQuick Pen 12mg (36IU) yeBelgium-yakagadzira unhu hweEurope iyo yatinopinza muThailand, uye saka tichazonzwisisa nei Genotropin ari nani?
Vimbisa hukuru hwevanhu hwekukura kwehomoni
Kubva kumutungamiri weEurope anogadzira mishonga yemishonga nemishonga - Pfizer inokuvimbika muhupamhi hwekukura kwehomoni
Kusununguka kwekushandisa HGH Genotropin pens
Kunaka kwekushandiswa kwekukura kwehomoni genotropin kuchengetedza uye kutakura kunokodzera kunyatsotarisirwa. Kugadzirira mushonga wekukura kwehomoni kunotora maminitsi 2 chete, vaiti vejenotropin vaitarisira kuisa nyore uye nyore kwekusanganisa injection solution uye kukura hormone powder, kugadzirisa mhosho chaiyo yemishonga.
Chigadzirwa chechibata chacho chinofungidzirwa kune zviduku zvishoma mukati mazvo zvinenge zvine mhinduro yekusanganisa uye kukura hormone - unogona kungovhenganisa nokuchinja chipani kubva panzvimbo yekubc kuti uise dhigirii sezviri kuitika 0.6 kana 0.9 ml pabhokisi - tora uye wapedza!
Zvimwe pamusoro pokusanganiswa, ona nyaya ino
Peni yekukura hormone inogadzirwa nekodzivirira, mushure mekusanganiswa kukura kwehomoni inofanira kuchengetwa pamasikirwo e8-12 digrii, iwe unongobvisa tsono, isa pavhare rekudzivirira uye uiise mufiriji
Famba neHGH mundiro uye pahandare
Vamwe vatengi vanobva kuSingapore vanoda kutora hormone yekukura kubva kuThailand kusvika kuSingapore kana kufamba, kureva kutora ndege. Kusiyana nekushambadzira uye kuipa kwechiChinese zvinyorwa, haufaniri kutakura newe kamwe kitambo chekubatsira chekutanga - seringe, maboules, zvirongo zvinogona zvakare kukonzera kunetseka pamitambo kana kudiwa kwekupa mamwe magwaro.
Genotropin chinyore iwe uchangobva kuisa mumutsipa kana kutakura mitoro uye unokanganwa nezvayo, pamwe
Genotropin haitore nzvimbo yakawanda uye haina girasi rakaoma inowedzera dambudziko rekukuvara
Chii chinonzi HGH (Somatropin)?
Kukura kwehomoni kana somatotropin ndeimwe yehomoni huru dzevanhu dzinobva kune imwe nzvimbo yepituitary. Somatotropin inokurudzira vanabolic action, inokurumidza kufambisa kweprotheni yakagadzirwa masero matsva, inokanganisa kuderedzwa kwemafuta mashoma, inowedzera chiyero chemasisita mashoma kusvika kumafuta. Une kuporesa mushure mekukuvara nekupisa kweganda, kurapa kwepafupa zvirwere.
Chinokosha kune vose vakadzi nevarume, vanoita sendimba yakasimba yekurwisa-kukwegura, inobatsira kubhadharisa zvakare kutora uye kushandiswa kwemasero ekare kana akafa nematsva. Muzvokwadi, kukura hormone ndiyo mishonga inoshandiswa yeramangwana, iyo ndiyo chikonzero chikuru chekurambidzwa kwekutengeswa zvakananga kwekukura kwehomoni.
Kazhinji mabhakorori emazuva ano uye tsvakurudzo inoshanda pakuvandudzwa kwezvinodhaka pamusana pekukura kwehomoni kune vanhu vanorema, mushonga wekuvaka muviri uye se "tsime rehuduku" semishonga inopesana nekukwegura.
Kushandisa HGH mumutambo
Vatambi vakawanda vanobva kuSingapore vanoshandisa kukura kwehomoni kuti vadzoke kubva mukukuvadzwa nekukuvadzwa kunokonzerwa nekukuvadzwa nemitambo ine ngozi yakadai sebhokisi, kurwisana pasina mitemo, basketball, yebhola nemamwe mitambo umo vatambi vanowanzowanzokuvadzwa, kuputika nematoni. HGH inogona kukubatsira kuti uwane nokukurumidza.
Kurapa kwamabvi uye nerubatsiro rwekukura kwehomoni
Nyanzvi dzevashandi pamagumo ehupenyu ruzivo ruzivo rwunorwadza muzvibatanidza, mabvi uye shure. Kurapa kwemajoini pamwe nekukura kwehomoni kunoratidza migumisiro yakaisvonaka - somuenzaniso, varwere vakamboona mabvi kana kuti kumashure
marwadzo mushure memasvondo e2 anotanga kudyiwa kwekukura kwehomoni inowanzotanga kuona kuchinja kukuru, mushure mokunge mwedzi we1 wemarwadzo wapfuura uye varwere vanogona kuramba vachifadzwa neupenyu uye kuzorora kushingaira uye mitambo yekutamba pasina matambudziko
Zvichida shanduro yakakurumbira yekukura kwehomoni yakange iri mukugadzira muviri semumwe wevatambi vezvidzidzo nevatangi vekurovedza muviri nekuda kwekurasikirwa kwehuwandu hwehutachiwana, hutsika hwehutachiona uye huwandu hwekukura kwemasumbu.
Kukura kwehomoni kunobata vanabolic effect, asi kusiyana nedzimwe steroid, yakachengeteka zvakakwana kushandiswa nokuti ine yakakura yekuwedzera hormone fomu kune pituitary gland.
Murwere anopa chikamu chekugadzirwa kwemhando yekukura kwehomoni, iyo inopera mushure memazuva e25 uye inoramba ichiramba ichiramba kusvikira munhu akwegura kwazvo. Zvichida ndicho chikonzero vechidiki vari pasi peC25 yemakore vanogona kuwana zvibereko zvakanaka pakuvaka muviri.
Ko kukura kwehomoni kunobata sei musimba kukura?
Kukura kwehomoni mukushanda kwekuita mune zvekurovedza uye masimba emasimba ane chikafu chakakodzera nehuwandu hwehuwandu hweproteine ​​uye amino acids - kazhinji kacho kunomhanya nekuumbwa kwemasero matsva, musinga fiber, kuchinjwa kwemasero ekare ane mitsva - ndiko kukura kwehomoni ndicho chivako chinonyanya kukosha pakuvakwa kwemuviri wako werota
Kurapa kwekuneta uye kuora kurasikirwa
Nyaya dzinonyanya kukosha ndehukama hwekuwedzerwa kune munhu pashure pemakore 25 - mutumbi unotanga kuunganidza hupfumi mumakumbo, mimba nemakumbo - zviri nyore kwazvo kuti kukura hormone zvakananga kunokanganisa metabolism yemuviri, mushure memakore 25 kukura kwemuviri kukura hormone kunoderera pane dzimwe nguva kupfuura munhu akwegura ndiyo nhanho yekuzvigadzirisa pasi uye muviri
Kurapa kwevarume vakwegura vachembera muSingapore
Zvinosuruvarisa kuti muviri wedu une maawa ekugadzirisa maawa uye kuti zvinhu zvose zvinorarama uye zvisingararami pasi pano zvinogona kuchinja nekukwegura. Munhu anokwegura nekuda kwekusakara uye kubvaruka kwemasumbu, maronda, kudzoka kunononoka kwemasero matsva kuti atsive vekare uye munhu anotanga kukwegura uye kupera.
Kukura kwehomoni kunokurudzira kupera nekuvaka masero matsva, masukisi nemakwenzi. Pashure pemwedzi we1, unoona kuvandudzwa kwehutanda hwebvudzi, ganda, misumari. smoothed out.
Hongu, izvi zvinoenderana nemajekiseni ekukura kwehomoni kuti mhuka inotanga kuchenesa pasi rose, kushandura masero ekare ane mitsva uye munhu anowana chinhu chakakoshesa - vechiduku, runako uye hutano
Matambudziko anokonzerwa neHuman Growth Hormone
Growth Hormone inosanganisira 191 amino acids yakafanana neyakasikwa kukura hormone yakagadzirwa nehutu hwepituitary. Kukura kwehomoni hakuna migumisiro uye saka yakachengeteka kune vose vakuru uye vana vane kukura kwehomoni
Kugadziriswa kwemamiriro ezvinhu ekukura kwehomoni kunogona kugoverwa muzvikamu zve 3:
- HGH nzira yekuvaka muviri
- Kurapa kwekuneta uye mafuta akawanda
Chikoro chechikoro chekambani yekukura hormone ndeye
3 IU mangwanani oga oga pamusana musina chinhu kana musati marara
kune vanhu vanopfuura makore 30 vane uremu kusvika ku 100 kg
kana 4 IU yevanhu vanopfuura 100-120 kg
Kuti uwane mamwe magwaro anonyatsotsanangurwa, tapota taura nevanowanikwa muInternet
HGH mutengo muSingapore uye nzira dzokubhadhara
Kukura kwedu hormone pharmacy muThailand kunopa murwere wedu akaderera achifananidzwa kune dzimwe nyika dzakadai seAustralia, US kana Canada. Kubhadhara yako yekuti iwe uwane chivimbo chakazara chokuwana kukura kwehomoni kusvika pamusuo weimba yako. Kune vatengi vedu isu tave takagadzirira kupa mvumo yekubhadhara hurongwa kuburikidza nekubhadhara kusvika pamwedzi wepamwedzi
Mwedzi unobhadhara wekuwedzera hormone muSingapore
Uye sezvo inoshanda? Havasi vese vatengi vakagadzirira kubhadhara nguva yakazara yekukura hormone 10-12 pakatari imwe chete, pasinei nokuti kutenga zvakawanda kunobatsira zvikuru kudarika zvishoma pamapakiji nguva imwe neimwe.
Isu takagadzirira vatengi vedu kubva kuimba singapore kuti tive nemutengo wakatarwa wehupenyu hwose hwekurapa kwekuwedzera hormone (miyezi ye6), pamwe nekubhadhara kusarudzo sarudzo dzedu varwere vanogona kubhadhara kukura kwehomoni mwedzi wose, zviri nyore uye zvakachengeteka kugamuchira zvakakosha kukura hormone mwedzi woga woga.
Semuenzaniso, mutengi anoda 2 packs yekukura kwehomoni mwedzi - anongobhadhara mari ye 2 pamutengo wakawanda, anowana mugove wake wegore negore uye mwedzi unotevera mitemo uye anopa zvikamu zvinotevera zve2 zvekukura kwehomoni. Iri urongwa huri nyore kwatiri, vatengi vedu uye tinoita hukama hwakakosha hwehutano pakati pedu nevarwere.